Markab ganacsi oo cilad darteed ugu xirtay Hobyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Markab ganacsi oo cilad darteed ugu xirtay Hobyo
8th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Hobyo – Mareeg.com: Markab kuwa xammuulka qaada ah oo ka soo kicitimay magaalada Sharjah ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta kuna sii jeeday magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa ku xirtay xeebta degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Markabka ayaa la sheegay in ay haysato cillad dhanka matoorka ah iyo shidaal la’aan, taasoo ku kalliftay inuu ku xirto xeebta degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Afhayeenka maamulka Ximan iyo Xeeb, Careys Maxamed Xaaji ayaa faah faahin ka bixiyay markabkaasi wuxuuna sheegay in shaqaalaha la socda markabkaas ay qeylo dhaan soo dirsadeen, kaddib markii dabeylo xoogan ay la kulmeen islamarkaana shidaalka uu ku yaraaday.
“Waxaan si deg deg ugu dirnay ciidamo sida gaarka ah ugu tababaran arrimaha badda islamarkaana wata doomaha dheereeya oo suura galin kara in ay soo badbaadiyaan dadka xaaladaha kale duwan ay ku qabsadaan badda, wayna soo badbaadiyeen oo hadda waxaa gacanta ku haya maamulka Ximan iyo Xeeb waxa ayna ku sugan yihiin degmada Hobyo ee gobolka Mudug” ayuu hadalkiisa ku daray Afhayeenka Maamulka Ximan.
Ugu dambeyntii Afhayeenka Maamulka Ximan iyo Xeeb Careys Maxamed Xaaji ayaa waxa uu sheegay in markabkaasi ay saarnaayeen 10 ruux oo ahaa shaqaalaha markabka kuwaa oo u kala dhashay 7-ruux oo Pakistan ah, 2 ruux oo Hindi ah halka midka kale uu u dhashay dalka Iran.
Warbixin sir ah: Askarigii ay sii deysay Daalibaan ayuu tababaray!
Al-Shabaab Reject ONLF Aiding Bakool Province Fighting